Wararkii ugu dambeeyay ee dhalinyaro lagu diley deegaanka Gololey ee degmada Balcad - Jowhar Somali news Leader
Home News Wararkii ugu dambeeyay ee dhalinyaro lagu diley deegaanka Gololey ee degmada Balcad
Meydadka illaa sagaal ruux oo u badan dhalinyaro ka howlgalaysay xarun caafimaad oo ay ku leedahay hay’ada Zamsam oo laga helay duleedka deegaanka Gololey ayaa la geeyay magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in meydadkan la geeyay xarunta dambi baarista ee CID si baaritaan loogu sameeyo.
Dadka la diley ayaa la sheegay in rasaas ay uga taal madaxa iyo qeybo badan oo jirkooda ka mid ah sida ay sheegeen dadkii gaaray halkii laga helay meydadkooda.
Iyadoo aysan jirin illaa iyo hadda aan si rasmi ah loo xaqiijin cidda ka dambeysay dilka dhalinyaradan ayaa hase ahaatee Nabadoon Muxidiin Xasan Afrax ayaa sheegay in dadka ka dambeeyay qafaalashada iyo dilka dadkan ay xirnaayeen dareeska ciidamada isla markaana ay isticmaalayeen gaadiidka dagaalka ee ciidamada milatariga Soomaaliya.
Sidoo kale Nabadoon Maxamed Cali oo degen degmada Balcad ayaa sheegey in 7 ka mid ah dadka la diley ay ahaayeen shaqaalaha MCHka Zamsam ayna qafaasheen ciidamo milatari ah ayna ku dileen duleedka deegaanka Gololey.
Hase yeeshee afhayeenka maamul goboleedka Hirshabelle Daa’uud Xaaji Cirro ayaa ku eedeeyay dilka raggan ururka Alshabaab isagoo beeniyay inay ka dambeeyeen ciidamo Milatari ah.
Labo maalmood ka hor ayaa meel aan ka fogeyn deegaanka Gololey waxaa ay miino kula qaraxda gaari ay saarnaayeen ciidamo Milatari ah waxaana qaraxaas ku dhintey siddeed kamid ah askartii saarneyd gaariga,waxaana qaraxa miinada sheegatay ururka Al-Shabaab.
Halkan ka aqriso Magacyada dadkan la diley.
1- Cumar Xuuti Maxamud.
2- Cabdicasis Cabdulqaadir Cabdulle.
3- Cali Axmed Cali.
4- C/saaq Cabdulaahi Qooble.
5- Maxamed Cumar Boore.
6- Abuukar Muuse Maaxi.
7- Yuusuf Ayuub.
8- Iyo Nuur Xaaji Gaas.
XOG: Villa Somalia oo qorsheyneysa inay soo celiso xiriirkii Imaaraadka
Ra’iisul Wasaaraha magacaaban oo kulamo muhiim ah ka wada Muqdisho